‘बुमर्‍याङ’ मा ओली ! « News of Nepal
‘बुमर्‍याङ’ मा ओली !
गएको सोमबार भएको नागरिक समाजको आन्दोलन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार लक्षित थियो । यसै पनि बालुवाटारवरिपरिको क्षेत्रलाई सरकारले आन्दोलन निषेध क्षेत्र घोषणा गरेको छ । त्यहाँ माघको चिसोमा नागरिक अगुवाहरूलाई पुलिसले कन्चट फुट्ने गरी पिट्यो ।
त्यतिले मात्र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका पुलिसहरूले चित्त बुझाएनन् । ‘हान्, तेरा बाउहरूलाई !’ भनेर कहिलेकाहीँ त ‘आमा चकारी’ गाली पनि गर्ने गर्छन् पुलिसहरू । पुलिसप्रति कुनै गुनासो छैन, किनकि ती आदेशपालक जो हुन्, सरकारका नून खाएका कर्मचारी हुन् । खराब त आदेश दिने सरकार र उसका मुखियाहरू हुन् ।
सपाट शैलीमा भन्ने हो भने, ओली स्थानीय निर्वाचनमै देउवा–प्रचण्ड अप्राकृतिक चुनावी गठबन्धनका विपक्षी थिए तर उनले यी कुरालाई वाच्यार्थमा ल्याएनन् । प्रचण्डले पनि देउवाको ‘ठेकी–मदानी’ प्रयोग गरेर जब भरतपुरमा छोरीका नाममा ‘नौनी’ झिके अनि ओली रिसले मुर्मुरिए । संघीय चुनावमा ओलीले एकताको पासो फ्याँके र जालमा प्रचण्ड सहजै परे ।
यतिखेर कामचलाउ भाँतीका प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै राजनीतिक हतियारका ‘बुमर्‍याङ’ मा परेका छन् ।
सोही दिन धेरै नागरिक अगुवाहरू पक्राउ परे । पानीको फोहोराले ढलाएका आन्दोलनकारीहरूको भागदौडको दृश्य टिठलाग्दो थियो । अझ टिठलाग्दो अनुहार त त्यहाँ नेपाली ढाका टोपीमा सग्लो नेकपाका स्थायी समिति सदस्य र हाल नेकपा प्रचण्ड–नेपाल गुटका नेता रघुजी पन्तको मलिन अनुहार पुलिसको घेराबन्दीमा थियो । धेरैले उनलाई पनि ‘नागरिक अगुवा’ भनिरहेका थिए ।
पहिलोपटक नागरिक अगुवाको पहिचानमा देखिएका उनी के हुन् वा के होइनन्, त्यो तपसिलको प्रश्न हो, जसको उत्तर समयले दिँदै जानेछ । तर त्यहाँ भएको दमन र नागरिक अगुवाहरूमाथिको सांघातिक आक्रमण सरकारको चरम अमानवीय प्रस्तुति पक्कै हो ।
यस्तो लाग्थ्यो त्यो दृश्य देख्दा कि अब ओलीतन्त्र छिट्टै अन्त्य हुँदै छ । तर के एउटा– दुइटा दमनले मात्र अहिले सडकमा आन्दोलनकारीहरूले भन्दै आएका ‘छोटे तानाशाह’ र ‘ओलीतन्त्र’को समूल अन्त्य हुन्छ त ? बौद्धिक वर्गमा यही चर्चा–परिचर्चा हुने गर्छ ।
ओलीतन्त्रको अन्त्य कसरी हुन्छ भन्दा पनि यो तन्त्र कसरी उदायो र नेपाली राजनीतिमा स्थापित भयो भन्नेतर्फ गहिराइमा जानुपर्ने हुन्छ । थेसिसका भाँतीमा विषयको मिमांसा नगरीकन सपाट शैलीमा भन्ने हो भने, ओली स्थानीय निर्वाचनमै देउवा–प्रचण्ड अप्राकृतिक चुनावी गठबन्धनका विपक्षी थिए तर उनले यी कुरालाई वाच्यार्थमा ल्याएनन् ।
प्रचण्डले पनि देउवाको ‘ठेकी–मदानी’ प्रयोग गरेर जब भरतपुरमा छोरीका नाममा ‘नौनी’ झिके अनि ओली रिसले मुर्मुरिए । संघीय चुनावमा ओलीले एकताको पासो फ्याँके र जालमा प्रचण्ड सहजै परे । प्रचण्डलाई स्थानीय चुनावमा कांग्रेससँग मिलेर आफ्ना सन्तान, नेता र आसेपासेलाई सेट गर्नु थियो, जब त्यो पूरा भयो उनले कांग्रेसलाई राजनीतिक तबरले ‘लात मारेका’ हुन् ।
केन्द्रीय चुनावमा ओलीले ‘शत्रुको शत्रु मित्रु हुन्छ’ भन्ने राजनीतिक आहानलाई युज गर्ने जमर्को गरे, नभन्दै सो सूत्र काम लाग्यो । एमालेको प्रधान र राजनीतिक शत्रु भनेकै २०४८ सालको चुनावदेखिकै कांग्रेस रहिआएको थियो । सोही तबरले कांग्रेस र माओवादीको एकता टुटाउनु ओलीको प्रथम उद्देश्य त छँदै थियो भने दोस्रो जनताबाट क्रमशः मोह भङ्ग हुँदै गएका प्रचण्डलाई उनको साइजको वास्तविकताको महसुस गराएर एकता गराउनु थियो ।
नभन्दै प्रचण्डले अनेक कवचमध्ये एकतालाई दह्रो सुरक्षाकवच ठानेर ओलीसँग साठी–चालीसको एकता स्वीकारेका हुन् । नत्र बेग्लाबेग्लै चुनावमा गएका भए को कति पानीमा हुन्थे, त्यो त्यति बेलै थाहा हुन्थ्यो ।
दुवै बूढाहरू ‘घिउ बेचुवा र तरबार बेचुवा’ को शैलीमा शंकाको सुविधा एक–अर्कालाई दिएरै एकताको विन्दुमा आएका हुन् ।
तर दुवैको भित्री मनमा भने आफ्नो सर्दो पर्दा दुवैले दुवैलाई बाँकी नराख्ने भन्ने सोच पहिलेदेखि नै रहिरहेको बुझिन्छ । चौरासी घुमाउन जान्ने झापाली नेता ओलीले हल्का भावनामा बहने प्रचण्डलाई कहिले ‘जेटको पाइलट’ भनेर फुरुङ्ग पारे भने कहिले ‘कार्यकारी दोस्रो अध्यक्ष’ भनेर ढाँटे । ओलीको चुनावी अभियानदेखि नै राजनीतिक विश्लेषकहरूले उनीमाथि अनेक प्रश्नहरू नउब्जाएका होइनन् ।
धनुषामा उनले राजेन्द्र महतोलाई जिताउन जुन किसिमको सद्भाव दिए, त्यसले विमलेन्द्र मात्र पछारिएनन् देशकै राजनीतिक सिनारियो बदलियो । उता राप्रपाका झापामा राजेन्द्र लिङ्देन र कृष्ण सिटौलाको टक्करमा त्यही गत दोहोरियो । सकुनी पासा फ्याँक्न माहिर ओलीसँग कसैको केही लागेन ।
त्यसै पनि महाधिवेशनबाट अध्यक्ष चुनिएकै थिए, झन् दुई पार्टी एक भएपछि संसदीय दलमा सर्वसम्मत नेता भए अनि इतिहासमै कहिले नपाएको बहुमत पाएर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा चढे । उनले देशको, उनको, आर्थिक व्यवहारको र जनताको समेत औकातभन्दा धेरै ठूल्ठूला सपनाहरू देखे ।
कति आफैँले देखे त कतिपय सल्लाहकार र शुभेच्छुकहरूका आँखाबाट देखेका सपनालाई आफ्ना सपना भनिदिए तर भित्रभित्र उनको मनमा परेका बेला प्रचण्डलाई हुत्याएर किनारामै पु¥याउने प्रचण्ड षड्यन्त्र छिपेको रहेछ ।
गएको पुस ५ गतेपछिका करिब सवा महिनामा उनको र प्रचण्डको दोहोरी, नाटक, नौटङ्की, प्रहसन र कटाक्षलाई हेर्दा यी चानचुने कालले नमर्ने, अजर, अविनाशी र सधैँ बाँचिमात्रै रहने ध्येय भएका नेता हुन् कि जस्तो लाग्न थालिसक्यो ।
होली वाइन ख्वाउने कार्यक्रममा यिनै थिए । सम्मान थाप्ने यिनै भए । भलै सो कार्यक्रममा प्रचण्ड अनेक बहाना देखाएर ओझेल परे । यही बेलादेखि नै यिनीहरूको व्यवहार ‘माछा देख्दा दुलामा हात र सर्प देख्दा पाखामा हात’ शैलीको देखियो । भलै ओलीले प्रचण्डलाई माथिदेखि तल गाउँस्तरसम्म एकीकरणमा झुलाइरहे ।
प्रचण्डलाई नसोचेको सम्मान, सिट र भागवण्डाको राजनीतिले फाइदै भयो । प्रमुख प्रतिपक्ष सातो हराएजस्तो भएर वाचाल मुद्रामा संसद्मा उपस्थितिमा सीमित थियो । एकप्रकारले ओली–दाहालले चाहेका भए ‘समृद्धि र विकास’ को जुन गुलियो नारा जनतामा फ्याँके, त्यो स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम अनिवार्य भएर देशैभरि एकैचोटि लागू हुन्थ्यो भने जनताले त्यो बेलाँ यी दुवै बूढा नेताको जयजयकार गर्दथे ।
मार्सी चामलको भात खाएर डा. गोविन्द केसीको उचित र मनासिव आन्दोलनविरुद्धमा विष वमन गर्नु नै पर्थेन । भला, मेडिकल कलेज स्थापना र चिकित्सा शिक्षा सर्वसुलभ पार्नका लागि आफ्नै हनुमानहरूलाई विश्वास मानेर काम गर्दा हुन्थ्यो । दाहाल र ओलीका चम्चाहरूले समृद्धि भनेको बाटो, पुल, भ्यु टावर, आकाशे पुल, रेल, पानीजहाज र मेघा सिटी भनेर यी दुईका कान भरे ।
आन्दोलनबाट स्थापित भएका यी पुराना सोचका बूढाहरूमा नयाँ समृद्धि त नयाँ सफ्ट पावरका साथ कृषिको यान्त्रिकीकरण, सामूहिक खेती प्रणाली, निर्यातमुखी कृषिको संस्कार र कृषिका सबै उपज उत्पादनमा युवावर्गलाई जोड्न सकियो भने त्यसले ल्याउने आर्थिक, सामाजिक र बौद्धिक परिवर्तनसँगै गाँसिएर समृद्धि आउँछ भन्ने विश्वास नै भएन । सल्लाहकारहरूले सो कुरा बुझाउने लेठो नै गरेनन् ।
ओली अहिले आफ्नै ‘तित्रे शैली’, फुर्के पारा, अरूलाई ओल्चेर मिनिमाइज गर्ने अहम् सोचकै कारण प्रतिनिधिसभा विघटनसम्म आइपुग्दा नपुग्दै राजनीतिक बुमर्‍याङमा परेका हुन् । उनी जसलाई काखी चेप्छन् तिनीहरूलाई विधि र विधान मिचेरै धर्मपुत्रसरह व्यवहार गर्छन् । यो सन्दर्भ पोष्यपुत्रका भूमिकामा रहेका महेश बस्नेत र गोकुल बाँस्कोटा मार्काका कार्यकर्ताहरूका गडफादर भनाउन मन पराउने फुर्के स्वभावका ओलीले तिनीहरूले गरेका हर्कतलाई सर्लक्कै नछोपिदिएका भए सुशासन र पारदर्शिताका नाममा तिनी एकलहर अघि बढ्ने थिए ।
नत्र जनताले तिनलाई के मानेमा कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा र माओवादीका पुष्पकमल दहालभन्दा उम्दो प्रधानमन्त्रीका रूपमा लिने ? आधार खै त ? भूकम्पपछि नाकाबन्दीमा नेपाली जनताले यिनको असली मुखुण्डो देखिनसकेका हुनाले राष्ट्रवादी बनेका हुन् । भलै सो कदममा पनि अनेक विरोधाभास रहेछन्, अहिले विचार्दा थाहा हुन्छ ।
एमाले र माओवादी केन्द्रको मिलन हिन्दीको ‘चार दिनकी चाँदनी फिर अँधेरी रात’ भनेझैँ भयो । पद भागवण्डाका बखेडा मिलाउन सकेका भए यिनीहरूले नसोचेको बहुमत ल्याएर जनताको मन जित्ने सौभाग्य पाएकै हुन् । अर्को चुनावमा पनि यिनीहरूले ठूल्ठूला विकासका पूर्वाधारहरू खडा गरेर जनतालाई देखाउन सक्या भए र शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि र सार्वजनिक यातायातमा ‘ले मेनहरू’ का लागि मन जित्ने गरी कार्यक्रम र नीतिको संयोजन गर्न सकेका भए यी दुवै करिब–करिब अमर नेता हुने लाइनमा लाग्नेथिए । यिनीहरूलाई आफूले पाएको मतको हेक्का नै भएन ।
यिनीहरूलाई आफ्नो शक्तिको एहसास नै रहेन । कस्तुरीझैँ नाभीमा विना लिएर घटनाहरूले देखाएझैँ यिनीहरू विदेशी प्रभुको पाउमा कहिले को, कहिले को साष्टाङ्ग दण्डवत् गर्न पुगे ।अघिल्ला सरकारहरूले ध्वस्त पारेका सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायात क्षेत्रलाई मात्र कुँडाकर्कटरहित, बिचौलिया, डन, तिग्रेमुङ्ग्रे, दलाल र माफियाहरूबाट मात्र बँचाउन सकेका भए यिनीहरू अझै एक–दुई चुनावमा छक्का मार्ने थिए ।
तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ, यिनीहरूले त्यो करिब–करिब दुई तिहाइको सरकारलाई लुटी खाने र भुटी खाने माध्यम बनाए । गायकले देश, काल र परिस्थिति सुहाउँदो ‘लुट कान्छा लुट’ शैलीको गीत बनाएर गाएको ठिक्कै थियो तर यी सबै मिलेर लखेट्न थाले । जनताको सेन्टिमेन्टले गायकको गीतलाई ठीक मानिसकेको अवस्था थियो ।
ठीक त्यस्तै स्वार्थको मार्सी भात खुवाउने ‘अस्पताल साहू’ दुर्गा प्रसाईंलाई अनावश्यक भाउ दिएर हिरो बनाउने र जनताको स्वास्थ्यप्रतिको चिन्ता र समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको फोहोर सिनित्त बनाउने असल अभियन्ता डा. गोविन्द केसीलाई असल भनाउन नदिने पनि यिनै दुई बूढाहरू हुन् । नयाँ पुस्ताको चेतना ह्वात्तै माथि गैसकेको छ ।
अब हामी मेनेजेरियल पुस्ता हुन सकेनौं भने चाँडोभन्दा चाँडो हाम्रो सत्ता नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गरेर हामी सल्लाहकार बन्नुपर्छ भन्ने पनि यिनीहरूले सोचेनन् । नाभीमा भएका षड्यन्त्रहरू सफल पार्न ओली अनेक सेटिङमा सफल हुँदै गए तर दाहाल ती सबै चटक हेर्न बाध्य भए । अहिले आएर आफूले खनेका खाडलमा ओली पर्न लाग्दै छन् ।
यिनले संसद् विघटनमा धारा उल्लेख नगरेका कुरा, राजपत्रमा सूचना नछापेका कुरा र सर्वमान्य कानुन व्यवसायीलाई होच्याएर अदालतको समेत अपहेलना गरेका कुरा अहिले आएर बाहिर आउँदै छन् । यी सबै कामहरूबाट यी शनैःशनैः आफ्नो ‘बुमर्‍याङ’ मा आफैँ परेका त होइनन् ? अहिले बौद्धिक व्यक्तिहरू र बौद्धिक सर्कलहरू गाउँठाउँमा समेत यिनै कुरा गर्दा रहेछन् ।
उत्कर्षमा पुगेको दोस्रो कोरोनाको अनखट
यसकारण हैरान छन् इन्टरनेटका नेपाली ग्राहक
ई–कमर्स र यसको सम्भावित मार्गचित्र
एक वरिष्ठ वकिलको संघर्षशील जीवन–कथा ‘अन्तर्य’
मन्त्री पदको अघोषित विज्ञापनको दिमागी आतंक
काठमाडौंमा एक साता निषेधाज्ञा थपियो, होटल तथा खाजाघर खुल्ने (सूचीसहित)
पशुपतिमा राखिएको सुनको जलहरी च्यातियो, अख्तियारद्वारा..
गृहमन्त्री खाण र मुख्यमन्त्री राउतबीच भेटवार्ता
अधिवेशनबारे अनिश्चितता बढ्नु पार्टी नेतृत्वको असक्षमता
निजी बैंकका कर्मचारी हाललाई सामाजिक सुरक्षा..
मनाङका सडकको मर्मत कार्य शुरू
उपत्यकाको सम्पदा क्षेत्र खतरामुक्त सूचीमा
शुक्रबारसम्म मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउने सम्भावना
ललितपुर महानगरपालिका–३ विधुतीय गाडी सञ्चालन गर्ने देशकै पहिलो वडा बन्यो
नेपालमा खोप उत्पादन गर्न अनुमति दिने सरकारको निर्णय
सहकारी बैंकको चेक क्लियरिङ नहुने नियम खारेज गर्छु:अर्थमन्त्री शर्मा
गहनाको अजीव लाइभ
करिश्मादेखि सुहानासम्मको केश सजाउँदै गीता
लापरबाही सरकार र अल्लारे युवापुस्ता